जनताको पक्षमा काम गर्छु : प्रमुख जिल्ला अधिकारी बर्दिया
प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७५, शनिबार १२:४१
(एक अब्बल सिडियो :- राम बहादुर कुरुबाङ)
साउन २६, २०७५ /
विं.स. : २०२७ साल तेह्रथुम १ फेदापमा जन्मनुभएका राम बहादुर कुरुबाङ हाल बर्दिया जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीयो) हुनुहुन्छ । विं.स : २०४५ सालबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका कुरुबाङ हाल नेपाल सरकारको सहसचिव हुनुहुन्छ । एमपीए, एबीए लगायतका औपचारिक अध्ययन पुरा गर्नुभएका उहाँ करिब ९ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) को रुपमा काम गरिसक्नु भएको छ । बर्दियामा पहिलो पटक एक्सन सिडियोका रुपमा चिनिनुभएका कुरुबाङले बर्दिया जिल्लाका नागरिकको पक्षमा थुप्रै काम कारबाहीहरु शुरुवात गरिसक्नुभएको छ । प्रशासक शासक होइन, नागरिकको सेवक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उहाँले बर्दियाका ठगी गर्ने सुन ब्यवासायि, पेट्रोल पम्प, कालाबजारी, तस्कर, निर्माण ब्यवासायि लगायत थुप्रैलाई कानुनी कारबाहीको शुरुवात गरिसक्नुभएको छ । उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर सबैले प्रशांसा गरेका छन ।
प्रस्तुत छ : समसामायिक सन्र्दभमा उहाँ सँग भिम उचै ठकुरीको संक्षिप्त कुराकानी
सिडियो साव यहाँलाई स्वागत छ ?
बर्दिया जिल्ला आउनुभएको कति समय भयो ?
करिब ३ महिनाभन्दा बढि भइसक्यो ।
सरकारी सेवामा कहिले प्रवेश गर्नुभयो ?
विशेष गरी मैले २०४५ साल देखी नै प्रवेश गरेको हो । निजामति सेवामा २०४५–२०४८ साल सम्म नावय सुब्बामा काम गरे । त्यसपछि ०४८ देखी ०५२ सम्म नेपाली सेनाको साहयक सेनानी (सेकेण्ड लप्टन) काम गरे । स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सेनापछि २०५५ मा निजामति सेवाको अधिकृत सेवामा प्रवेश गरे । उपसचिव हुदै सहसचिवको रुपमा हाल कार्यरत छु ।
यसअघि कुन–कुन जिल्लामा काम गर्नुभयो ?
यसअघि मोरङ, प्युठान, म्याग्दी, सोलखुम्बु, अछाम, ताप्लेजुङ गरी विभिन्न ९ जिल्लाभन्दा बढिमा सिडीयो भई काम गरिसकेको छु ।
बर्दिया जिल्लामा केके काम गर्ने तपाईको योजना छ ?
योजना नम्बर १ मा बर्दिया जिल्ला बाढि ग्रस्त जिल्ला रैछ, त्यसैले विपत्त ब्यवस्थापनका लागी पूर्व तयारी गर्ने, र राहत ब्यवस्थापनका कार्य चुस्तदुरुस्त तरिकाले परिचालन गर्ने, अनि दोस्रो नम्बरमा गुणस्तरिय बजार अनुगमन गरी उपभोक्क्ताको हित संरक्षण गर्ने, गलत तरिकाले ब्यपार गर्ने परिपाटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, तस्करीलाई पुर्ण रुपमा निर्मुल पारी अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने, राष्ट्र सेवक कर्मचारीका नाममा गरिने भ्रष्टचारको समुल नष्ट गर्ने, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध कडा कदम चाल्ने, अनि विकास निर्माणमा गरिने ढिलाई अन्त्य गदै दण्डहिनतालाई कानुनी दायरामा ल्याउने योजना छ । जनता र राज्यलाई जोड्ने खालका काम गर्ने योजना बनाएको छु । र बर्दियाका आम जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिनका लागी घुम्ती शिविरहरु सञ्चालन गर्ने ।
बर्दियामा १२ जना सुन ब्यापारीलाई तपाईले पक्राउ गर्नुभयो ? कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
सुन ब्यापारीहरुको विषयमा सुनमा अरु धातु मिसाएर बेच्ने यो कालोबजारी हो । एक तोला सुनमा साढे १२ प्रतिशत जर्ती लिने गरिन्छ, यो पनि कालोबजारी हो । कानुन अनुसार दुई,तिन प्रतिशत भन्दा बढि जर्ती लिन पाईदैन । अनि तपाई सुन पसलमा जानुभयो भने ठगीनुभयो, १२ जना ब्यापारी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, केही धरौटीमा छुट्नुभा,छ । उहाँहरुलाई कानुन अनुसार नै कारबाही हुन्छ ।
त्यसो भए उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ ?
यो कारबाही मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने हो । चित्त नबुझे उहाँहरुले पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्छ ।
निर्माण ब्यवासायिले गर्ने ढिलासुस्तीलाई कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ ?
तपाईहरुलाई पत्रकारहरुलाई टुबीफ्रयाङक भन्नुपर्छ, अब हामी के गर्छौ भने अटेरी गरी गुणस्तरहिन काम गर्ने त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गछौ, सम्झाई बुझाई गछौं, कागज गराउछौं, यस्तो नगरे गुणस्तरिय काम हुदैन । यसको रिजल्ट राम्रो आ,को छ । जनतालाई त फाइदा भयो नी, अब हेर्नुहोस न, राजापुर नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने त्यो मान्छे छ, सात महिना देखी बेपत्ता थियो, हामीले पक्राउ गरेर ल्यायौं, अहिले काम गरिरहेको छ, त्यस्तै कल्र्वट निर्माण, बाटो निर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्छौं ।
बर्दिया जिल्लाका बजार अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ ?
बजार अनुगमन यस्तो छ, हामी हप्ताको एक पटक गछौं । बजार अनुगमन ब्यापक छ, यो र उ भन्ने नै छैन । भन्छन नी, नुन देखी सुन सम्म हुन्छ । अब हामीले शुरुमा चार, पाँचवटा स्याम्पल क्लेक्सन ग¥यौं, सुनको त रिजल्ट आईसक्यो, सबै मिसावट थियो । त्यसपछि हामीले खानेपानी, ड्रिकिङवाटर, खानेतेल, सिमेन्ट लगायतका स्याम्पल दिईसक्यौ, नेगेटिभ आए कारबाही गछौ । त्यो हुन्छ नी फलामे छड, त्यसको पनि गुणस्तर हुनुपर्छ, भएन भने कारबाही गछौं । अनि हामीले दण्डात्मक सगै चेतना पनि बढाएर जाने विचार गरेका छौं, यसका लागी हामी उद्योग वाणिज्य संघ सँग समवन्य गछौं, बजार अनुगमन एकदमै पारदर्शि हुन्छ, सहभागीता मुलक हुन्छ । पत्रकारहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा लान्छौ, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नगरपालिकाका प्रतिनिधि, विशेषज्ञ लगायत हामी हुन्छौं । स्याम्पल ल्याव टेष्टमा खराब आयो भने मुद्धा दायर गरी हाल्छौं, कसैलाई सचेत गरेर छोड्ने भन्ने कुरो हुन्न ।
विपत्त ब्यवस्थापनको लागी तपाईहरुको पूर्व तयारी कस्तो छ ?
हामीले ८० प्रतिशत काम गरी सकेका छौं । बाढि आउने जोखिम कम छ, समय कम भएपनि पूर्व तयारी गरेका छौं । जोखिम युक्त ठाउँहरुमा सबै नगरपालिका, गाउँपालिका सँग समन्वय गरी तयारी गरेका छौं । तटवन्धन निर्माण औराही, भादा लगायतमा नदी ब्यवस्थापनका काम गरिरहेको छ । अबको तीन वर्षमा बर्दियामा पुर्ण नियन्त्रण गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं, कामहरु धमाधम भईरहेका छन । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सबैलाई अर्लट राखेका छौ, मैले एसपी सापहरुलाई भन्या छु, तयारी छ । बिग्रेका डुंगाहरु, लाइफ ज्याकेटहरु, म्यानपवारहरु, उद्धारका सामाग्रीहरु तयारीमा राखेका छौं । स्थानिय तहले रु १५ लाख सहयोग गर्नुभएको छ । ति सामाग्रीहरु मागेर भएपनि जुटाएर तयारी अवस्थामा छौं ।
एक्सन लिने क्रममा कत्तिको प्रेसर महसुस गर्नुभएको छ ?
अब गोरु तस्करी नै हेर्नु न, सबै मिल्या जस्तो लाग्यो । प्रेसर त आउँछ ।
अनि सिडियो साव, बर्दियामा आईसकेपछि सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागी के कारबाही गर्नुहुन्छ ?
भ्रष्टचारले देशलाई चुरुलुम्व डुबाउछ, स्थानिय तह सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार स्थानिय प्रशासन ऐन अन्र्तगत सुपरीवेक्षण गछौं ।
हाम्रो अनलाइन मार्फत अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
अब एक वर्ष बस्ने योजना छ, एक वर्ष भित्र म रिजल्टमा विश्वास गर्छु, देखिने गरी काम गर्छु, निष्ठा र इमानदारितामा विश्वास गर्छु । राष्ट्र सेवक कर्मचारीले आफुलाई शासक होइन सेवकको रुपमा हेर्नुपर्छ । बर्दियामा गुणस्तरिय विकास सगै सुशासनको काम गर्ने विश्वास लिएको छु । सडक जनताको लाइफलाइन हो, यसमा अवरोध गर्ने खोज्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गरिन्छ । सबैको सहयोग हुने अपेक्षा राखेको छु । बर्दियाका जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा दिने विचार गरेको छु । दण्डहिनताको अन्त्य गदै थिती बसाल्ने विश्वास छ ।
हाम्रो अनलाइन सँग कुरा गर्नुभएकोमा सिडियो सावलाई धन्यवाद ?
हवस्त , धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो ।
सिडियोको बारेमा कसले के भने ?
संञ्जय गौतम (प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सभापति नेपाली काग्रेस बर्दिया)
सिडियो साव इनरजेटिक हुनुहुन्छ । स्वस्थ, निष्पक्ष, प्रशासनिक दक्षता देखिएको छ, अहिले सम्मका क्रियाकलाप हेर्दा सन्तुलित ढगंले स्वस्थ प्रशासन बनाउन सफल हुनुभएको छ, उहाँको भुमिका राम्रो छ ।
तिलक शर्मा (हिमाल) प्रदेश सभा सदस्य (पाँच नम्बर प्रदेश)
उहाँको काम गर्ने स्टायल फौजी छ, त्यो सबभन्दा राम्रो पाटो हो । एक्सन परिणाममा चाहियो, उहाँ जनताका लागी ज्यान फालेर काम गर्ने जुन स्प्रिट छ, त्यो सबैभन्दा राम्रो छ ।
मुक्तीनाथ यादव (किट्टु) (नगरप्रमुख) गुलरिया नगरपालिका
सिडियो साव एकदम जनताको पक्षमा लाग्नुभएको छ । उहाँको काम प्रति एकदमै खुसी छु । उहाँ बर्दिया जिल्लालाई खाँचो छ ।
दुर्गा बहादुर थारु (कविर) नगरप्रमुख बारबर्दिया नगरपालिका
उहाँको काम एकदमै प्रभावकारी लाग्यो, उहाँ एकदमै एक्टिभ लाग्यो, बारबर्दियामा आँधीहुरी आउदा पनि जनताको पक्षमा चिन्ता लिदै के भो भनी यहाँ आईपुग्नुभयो । उहाँ अत्यन्त सक्रिय लाग्यो ।
जमानसिंह केसी (अध्यक्ष) गेरुवा गाउँपालिका
मैले बुझे अनुसार उहाँको भुमिका असाध्यै राम्रो छ । हाम्रो गाउँपालिका टाढा भएपनि उहाँको कार्यशैली प्रति धेरै खुसी छु, चारैतिर राम्रो सुनिएको छ ।
राजेन्द्र प्रसाद धिताल (अध्यक्ष) नेपाल पत्रकार महासंघ
सिडियो साव काम गराईको तरिका प्रभावकारी छ । गुनासो सुन्ने, कार्यन्वयन गर्ने, फास्ट रेसपोन्स गर्ने, मिडियामैत्री, पत्रकारहरुलाई सुचना अपडेट गर्नुहुन्छ, समग्रमा उहाँको प्रस्तुति धेरै राम्रो छ ।
तुलसी तिमील्सेना (अध्यक्ष) होटल अर्गनाइजेसन
उहाँको सबैलाई समेटने, सबै सँग अन्र्तक्रिया गर्ने, सबै कुरा प्रभावकारी छ ।
मुकुन्द सुवेदी (पूर्व अध्यक्ष प्रेस चौतारी नेपाल)
सिडियो साव मिडिया मैत्री हुनुहुन्छ, सबै तिर राम्रो काम गर्नुभएको छ, नागरिकको पक्षमा लागी पर्ने उहाँको बानी साहै्र राम्रो छ । बर्दियाले आवाश्यकता महसुस गरेको सिडियो सावमा उहाँ एक नम्बरमै हुनुहुन्छ ।
गणेश केसी (कृष्ण) (नगरप्रमुख) मधुवन नगरपालिका
सिडियो साव युवा हुनुहुन्छ, एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, जनताको पक्षमा काम गरी रहनुभएको छ, उहाँ आफै जनताको काममा खटिएर लाग्ने गर्नुहुन्छ, बर्दिया जिल्लामा त धेरै सिडियो सावहरु आउनुभयो, तर उहाँ जस्तो काम गर्ने पहिलो सिडियो साव पाए, आफै संम्बन्धित स्थलमै पुगेर काम गर्ने सिडियो साव हुनुहुन्छ, मधुवनबासीहरु एकदमै खुसी छौं । उहाँको नियत भनेको जनताको काम छिटो छरितो गर्ने । उहाँ आई सकेपछि धेरै समस्या समाधान गर्नुभयो । उहाँको काम प्रति हामी जनप्रतिनिधिहरु एकदमै सन्तुष्ट छौं ।
संगठित हुदै ठकुरी , बारा र रौतहटमा जिल्ला कार्यसमिति गठन
मकवानपुरमा राधिका ठकुरीको संयोजकत्वमा ठकुरी सहयोग संजाल गठन
ठकुरी सहयोग संजालद्वारा पृथ्वी जयन्तीको दिन र्‍यालीमा सहभागी हुन आव्हान
पौष २७ मा बिदा कटौती गर्नुको भित्रि काराण यस्तो छ ( भिडियो सहित)
ठकुरीको कार्यवाहक अध्यक्षमा अजय मल्ल ठकुरी ।